Shiinaha oo la tuurayo galoofisyada PVC ee Warshadaha iyo Warshadaha | Zhongmaohua
Kuwa la tuuro galoofyada PVC
Gacmo gashiga PVC ee la tuurayaa waa guluubyo polymer ah oo la tuuro karo, kuwaas oo ah alaabada ugu dhaqsaha badan ee soosaarka warshadaha galoofiska ilaalinta. Shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha warshadaha cuntada ayaa garanaya sheygan sababta oo ah galoofiska PVC waa kuwa raaxo leh in la xiro, la beddeli karo si loo isticmaalo, ma ku jiraan wax walxaha dabiiciga ah ka sameysan, oo ma keeni doonaan xasaasiyad.
Geeddi-socodka wax soo saarka
Material Kormeerka shay Ra qulqulka → qalajinta → Farsamaynta balaastikada → Kala daadinta kuleylka iyo qaboojinta → guska PU ama budada qoyan → qulqulka → qalajinta → Dheecaan dhalo-Sii daayo → Soo bandhigid → Baxsashada → Baaritaan → Baakadaha → Kaydinta Ins Kormeerka Maraakiibta
Baaxadda iyo dalabka
Shaqada guriga, elektiroonigga, kiimikada, biyaha, galaaska, cuntada iyo warshadaha kale ee ilaalinta, isbitaalada, cilmi baarista sayniska iyo warshadaha kale; si balaadhan looga isticmaalay rakibida semiconductor, asalka saxda ah ee elektarooniga ah iyo aaladaha iyo howlgalka maacuunta biraha dhejiska leh, rakibaadda alaabada tignoolajiyadda sareysa iyo dib u soo celinta diskiyada qalabka, qalabka wax lagu karsado, mitiryada muuqaalka LCD, xargaha wax soo saarka wareega, alaabada indhaha, sheybaarada, isbitaalada, jardiinooyinka qurxinta iyo beeraha kale.
Gacmo gashiga PVC ee la tuuro (3 sawir)
Meelaha nadiifka ah sida semiconductor, microelectronics, bandhigay alaabada LCD iyo waxyaabaha kale ee xasaasiga ah, caafimaadka, daawada, injineernimada cilmiga noolaha, cuntada iyo cabitaanka, iwm.
1. Raaxo leh in la xidho, xidho muddo dheer ma keeni doonto xiisad maqaarka ah. Dhiirrigelinta wareegga dhiigga.
2. Malaha xeryahooda amino iyo walxaha kale ee waxyeelada leh, dhif iyo naadir ayay keenaan xasaasiyad.
3. Awoodda gantaal culus, iska caabbinta aaladda, iyo ma fududa in la jabiyo.
4. Xirmidda wanaagsan, tan ugu waxtarka badan ee looga hortago in boodhku ka baxo dibadda.
5. iska caabin heer sare ah oo kiimiko ah iyo iska caabin ah pH.
6. Waxyaabaha ay ka sameysan yihiin silicone-ka, oo leh qaar ka mid ah guryaha dabiiciga ah, ee ku habboon baahiyaha wax soo saarka ee warshadaha korontada.
7. Qeybta hoose ee hadhaaga kiimikada dusha sare, hoose ee maadada ion, iyo walxaha yaryar, oo ku habboon jawiga qolka nadiifka ah.
Shaygaani gacanta bidix iyo midig uma socdo, fadlan dooro galoofyada ku habboon tilmaamaha gacantayda;
Markaad xiran tahay galoofyada, ha saarin tabarado ama waxyaabaha kale ee lagu dhejiyo, fiiro gaar ah u yeel ciddiyaha;
Alaabtaani waxay ku xaddidan tahay hal mar adeegsiga; kadib isticmaalka, fadlan ula dhaqan sidii qashin caafimaad si looga hortago in xanuunada wasakhoobaan deegaanka;
Waa mamnuuc in si toos ah loogu duuduubo iftiin xoog leh sida iftiinka qorraxda ama shucaaca shucaaca.
Xaaladaha kaydinta iyo hababka
Waa in lagu kaydiyaa bakhaar qabow oo qallalan (heerkulka gudaha ayaa ka hooseeya 30 digrii iyo huurka kuleylka ayaa doorbidan inuu ka hooseeyo 80%) shelf 200mm ka fog dhulka
Waqtiga boostada: May-07-2020